बधाई ! दोस्रो वनडेमा भारतको शानदार जित , अष्ट्रेलिया ३६ रनले पराजित - News20 Media
January 17, 2020 January 17, 2020 N20LeaveaComment on बधाई ! दोस्रो वनडेमा भारतको शानदार जित , अष्ट्रेलिया ३६ रनले पराजित
काठमाडौंः भारत विरुद्धको एकदिवसीय क्रिकेट सिरिजको दोस्रो खेलमा अष्ट्रेलिया ३६ रनले पराजित भएको छ । भारतले दिएको ३ सय ४१ रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको अष्ट्रेलियाले ४९.१ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ३ सय ४ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
उसका लागि स्टिभ स्मिथले १०२ बलमा १ छक्का र ९ चौका प्रहार गर्दै ९८ रन बनाए । यस्तै मार्नस लाबुसानेले ४६, कप्तान आरोन फिन्चले ३३, एश्टन अगरले २५, एलेक्स क्यारीले १८, केन रिचर्डसनले अविजित २४, डेविड वार्नरले १५, एश्टन टर्नरले १३ रनको योगदान दिए ।
बलिङमा मोहम्मद शामीले ३, नवदीप शैनी, कुलदीप यादव, रवीन्द्र जडेजाले २–२ र जसप्रीत बुमराहले १ विकेट लिए । यसअघि टस हारेर ब्याटिङको मौका पाएका भारतले निर्धारित ५० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर ३ सय ४० रन बनायो ।
उसका लागि शिखर धवनले ९६, केएल राहुलले ८०, कप्तान विराट कोहलीले ७८, रोहित शर्माले ४२, रवीन्द्र जडेजाले अविजित २०, श्रेयस अय्यरले ७ र मनीष पाण्डेले २ रन बनाए ।बलिङमा अष्ट्रेलियाका एडम जम्पाले ३ र केन रिचडर्सनले २ विकेट लिए । आजको जितसँगै भारतले ३ खेलकाे सिरिज १–१ ले बराबरी गरेको छ । अष्ट्रेलिया–भारतबीचको ‘निर्णायक खेल’ आइतबार हुनेछ ।